Farsamooyin Muhiim ah oo Naqshadeynta Webka ah si loogu daro Websaydhka Shirkadda Sharciga ah | Martech Zone
Suuqa sharciga ah ee maanta waa mid sii kordhaya tartanka. Natiija ahaan, tani waxay cadaadis badan saareysaa qareeno badan iyo shirkadaha sharciga si ay uga istaagaan tartamada intiisa kale.
Waa adag tahay in lagu dadaalo a joogitaanka xirfadeed ee khadka tooska ah. Haddii bartaadu aysan ku qancin wax ku filan, macaamiisha waxay u gudbaan tartamayaashaada.
Taasi waa sababta, magacaaga (oo ay ku jiraan websaydhkaaga) ay tahay inuu si weyn u saameeyo ganacsigaaga, kaa caawiyo inaad hesho macmiil cusub, iyo inaad kobciso dakhligaaga.
Mashruucan, waxaan kugula socon doonnaa farsamooyinka naqshadeynta websaydhka muhiimka ah ee aad ku dari karto boggaaga shirkadda sharciga:
Qorshee Marka Hore Waxkastoo Kale
Websaydhkaagu wuxuu matalaa shirkaddaada sharciga, shaqadaada - sumaddaada.Marka isticmaaleyaasha websaydhku booqdaan bartaada markii ugu horreysay, waxay horey u leeyihiin aragti ugu horreysay oo la sameeyay.
Marka, haddii aad isticmaaleysid shey khaldan oo bartaadu u egtahay boqolaal shirkado kale oo internetka ah, markaa waad ku guul darreysaneysaa inaad aragti gaar ah la yeelato dhagaystayaashaada.
Muxuu macmiil kuu xusuusanayaa haddii bartaadu u egtahay sida daraasiin shirkado kale ah oo ay la kulmeen?
Marka, qorshee si waafaqsan. Waa kuwan dhowr talooyin:
In kayar ayaa intaa ka badan. Ha ka buuxin bartaada internetka qoraallo iyo sawirro. Taabadalkeed, waxaad diirada saartaa dhinacyada ka dhigi doonta waxyaabaha aad akhrin karto iyo kuwa kugu kalifaya.
Soo-booqdayaashu waxay isku dayi karaan inay ku soo galaan aaladaha mobilada kala duwan. Marka, iska ilaali inaad ku darto astaamo qalafsan bogaggaaga sida animations flash. Sidoo kale, ha u qaabeynin boggagaaga qaab ku habboon oo keliya cabbirka shaashadda waaweyn.
Hubso inaad haysato naqshad astaan ​​xirfadeed. Hubso inay tahay mid gaar ah; haddii kale, waxaad abuureysaa aragti liidata. Taas ka sokow, waxaad sidoo kale kuu soo bandhigi kartaa qatar sharci oo weyn.
Imtixaanada orod. Jaantus noocee ah nooca, midabada, iyo badhannada aad ku kasbato qasabnada ugu badan.
Ka dhaadhici isticmaalayaashaada inay talaabo qaadaan. Ka fikir ficilka aad rabto in isticmaaleyaashaadu ay ku isticmaalaan a ficil ficil caan ah.
Xoogga saar Mawduucaaga
Haddii aadan wali ka warqabin, barta matoorrada raadinta ee ku saleysan isku xirnaanta iyo tayada waxyaabaha. Marka, inta badan ee aad daabacdo, ayaa soo jiidasho leh waxay u noqon doontaa matoorada raadinta.
Hubso inaad had iyo jeer daabacdo waxyaabo cusub, soo jiidasho leh, iyo waxyaabo tayo sare leh. Fursadaha ayaa ah, haysashada waxyaabo liita waxay sababi doontaa booqde degel inuu ka tago goobtaada.
Intaa waxaa dheer, ha dhayalsan farsamaynta cinwaannada waaweyn. Waxay sameyn karaan farqi u dhexeeya booqdaha websaydhka oo akhrinaya inta kale ee ka kooban ama ka tagaya boggaaga.
Ka fikir Raadintaada
Waxaad u baahan tahay inaad ku dadaasho degel si sahlan loo raaci karo. Hubso inay sidoo kale tahay ka jawaaba dhammaan noocyada qalabka - laga bilaabo taleefannada casriga ah, kiniiniyada, kombiyuutarada desktop, iwm.
Waa kuwan waxyaabo kale oo laga fiirsado hubinta inaad dhiseyso degel si fudud loo isticmaali karo:
Ka dhig marinka aasaasiga ah mid bilaash ah xiriiriyeyaasha aan loo baahnayn.
U fiirso in waxa ku jira ay fududahay in la akhriyo.
Yaree waxyaabaha kale ee kaa mashquulin kara sida popups, animations, automatics plays of video and other multimedia content, and more.
Haddii aad dhisto goob jahwareer leh oo ay adag tahay in la isticmaalo, waxaad iska leexin doontaa macaamiisha mustaqbalka. Si loo hubiyo in taasi aysan kugu dhicin adiga, ujeedso degel si fudud loo sahamin karo.
Had iyo jeer Isticmaal Sawirrada Khuseeya
Markaad kudareyso sawirada bartaada, xulashada sawir kaydinta waxay umuuqan kartaa ikhtiyaar toosan. Laakiin waxay leedahay cillado, sidoo kale. Fursadaha ayaa ah, kuwani waxaa horeyba u adeegsaday boqollaal (haddii kale kumanaan) shirkadaha kale ee sharciga.
Haddii aad rabto inaad ka soo baxdo inta ka hartay baakadka, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho sawirro xallin sare leh oo shakhsiyan u leh astaantaada.
Marka, maxaad ugu soo bandhigi la'dahay xafiisyadaada iyo kooxdaada sawirradan? Waxay bini'aadamnimadaada u aqoonsataa, sidoo kale.
Tusaale ahaan, waxaad soo bandhigi kartaa sawirrada qareennadaada ama qolka xafiiskaaga. Markaad sidaas sameyso waxay ku abuureysaa kuleyl, muuqaal aad u xiiso badan bartaada.
Ku dar Tixraacyo Macmiil
Sida laga soo xigtay Amazelaw - Dadka qaarkiis waxay u muuqdaan inay qiimeeyaan shirkadaha sharciga iyagoo ku saleynaya la talinta iyo markhaatiyada macaamiisha kale. Tijaabooyinku waa nooca ugu xoogan ee xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha. Marka ha ka baqin inaad u isticmaasho dantaada.
Waxaad ku dhejin kartaa markhaatiyo boggaaga hore ama waxaad ku abuuri kartaa bog gooni ah websaydhkaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ku soo bandhigi kartaa kuwan qareennadaada qareennada.
Hayso Shabakad SEO-Diyaar ah
Goobtaadu waxay u baahan tahay in lagu hagaajiyo makiinadaha raadinta si aad uga faa'iideysan doonto faa'iidooyinka taraafikada dabiiciga ah.
Waa kuwan dhowr waxyaalood oo maskaxda lagu hayo markay tahay SEO:
Ka fogow walxaha muhiimka ah maxaa yeelay taasi waxay kuu horseedi kartaa mashiin raadin sida Google oo ciqaabaya bartaada.
Ka faa'iideyso qoraalka alt iyo magacyada saxda ah ee sawirrada maxaa yeelay waxay ka caawineysaa makiinadaha raadinta inay si fiican u fahmaan waxyaabahaaga. Intaa waxaa sii dheer, u adeegso qaabeynta ku habboon qoraalkaaga sidoo kale.
Halkii aad u adeegsan lahayd "halkan guji" ama "dhagsii tan" xiriiriyeyaashaada, adeegso sharraxaadda macnaha guud leh, maadaama ay ka dhigeyso akhristayaasha inay fahmaan waxa isku xirnaantaadu ku saabsan tahay. Waxay sidoo kale ka caawineysaa makiinadaha raadinta inay ogaadaan inaad ku xirnaanayso ilaha ku habboon iyo in kale.
Waayahay, markaa halkaas waad haysataa! Waxaan rajeyneynaa, talooyinkani waxay kuu jiheyn doonaan jihada saxda ah ee abuurka degel websaydh qaanuuneed ku shaqeeya oo u gaar ah kaas oo u rogi doona martidaada websaydhka macaamiil muddo dheer ah
Tags: shirkad sharciboggaga shirkadaha sharcigashabakadaha qareenkataleefanka gacantaSEOdesign web